José Mourinho oo ka warbixiyay waqtigii ugu xumaa ee xirfadiisa tababarnimo – Gool FM
(London) 24 Sebt 2020. Tababaraha kooxda Tottenham Hotspur ee José Mourinho ayaa wuxuu shaaca ka qaaday waqtigii ugu xumaa ee xirfadiisa tababarnimo.
José Mourinho ayaa wuxuu si cad u sheegay in waqtigii ugu xumaa ee xirfadiisa tababarnimo uu ku qaatay kooxda Real Madrid, gaar ahaan Champions League intii lagu gudajiray xilli ciyaareedkii 2011-2012, waxayna ka hareen tartanka kaddib markii ay guuldarro kala kulmeen Bayern Munich.
Mourinho ayaa tababare u soo noqday kooxda Real Madrid mudo saddex xilli ciyaareed ah, wuxuuna inta uu joogay kula guuleystay horyaalka La Liga, Copa del Rey, iyo Spanish Super Cup, balse wuxuu ku guuldarreystay inuu la qaado koobka Champions League inkastoo uu gaaray semi-finalka xilli ciyaareedyadii uu joogay oo dhan.
Mourinho ayaa sharraxay in Real Madrid ay ahayd kooxdii ugu xoogga badneyd Yurub xilli ciyaareedkii 2011-2012 oo ay Bayern Munich kaga cirib tirtay tartanka Champions League rigoorayaal, taasoo muujineysa inay ahayd xilligii ugu adkaa ee xirfadiisa tababaranimo.
Wargeyska “Marca” ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay macalinka reer Portugal iyo kooxda Tottenham ee José Mourinho, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Hadii aan doorto daqiiqadii ugu xumeyd, waxay aheyd markii laga reebay Real Madrid Champions League, shaki la’aan waxaan aheyn kooxdii ugu xoogga badneyd Yurub”.
“Waxaan ku guuleysanay horyaalka La Liga, waxaan jabinay dhammaan rikoorrada tirada dhibcaha iyo goolasha, waana guuleysan lahayn haddii aan gaarno finalka, taasina wax shaki ah kama qabin”.
“Waxa ugu xun ayaa ah inaan u dooranay Cristiano Ronaldo, Ricardo Kaka iyo Sergio Ramos inay tuuraan rigoorayaasha, waxay ahaayeen ciyaartoyda aan u xilsaaranay rigoorayaasha, balse ma aanan fileynin in kuwa aan horay u fashilmin ay hadda fashilmi doonaan”.